Mkpụrụ vaịn "Marcelo": nkọwa nke ụdị dị iche iche, àgwà ya na àgwà ya, foto - Ugbo - 2019
Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Marcelo": nkọwa na atụmatụ nke iji osisi
Mkpụrụ vine "Marcelo" chọrọ osisi ndo maka oyi. Enwe mkpụrụ dị ịrịba ama na nnukwu shuga.
Uru ya bara uru bụ ịkpụ mkpụrụ mmanụ mkpụrụ vaịn. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu n'ụzọ zuru ezu banyere àgwà na njirimara nke ụdị dịgasị iche iche, anyị ga-aghọta nuances nke nsị na nchedo site na ọrịa na pests.
Nkọwa nke grape dị iche iche Marcelo
Ubu oke na ntu oyi
Kedu ụdị ọ bụ?
"Marcelo" dị iche iche na-ezo aka n'ụdị mkpụrụ vaịn. Ọ bụ ama maka ihe ngosi dị mma, ọ dị mfe ire na ịga nke ọma. Enwere ọtụtụ nzaghachi dị mma sitere n'aka ndị na-eto eto. Na-achọ "ọ bụghị iwe" iche.
Anyut, Vodogray na onyinye nke Zaporozhye nwekwara ike ịnya isi ngosi.
O nwere ụlọ nkwakọba ihe nke nri. Otu uru bara uru bụ nsị mmanụ site na mkpụrụ osisi mkpụrụ vaịn "Marcelo". Nke a bara ọgaranya vitamin Enke na-echebe mkpụrụ ndụ nke ahụ mmadụ site na mbibi site na free radicals.
A na-eji ya maka akpụkpọ ihu na ntutu isi, yana n'ime sel cell cancer. Ọ na-ewepụ ihe ndị na-adịghị mkpa na ahụ. N'ihi nkedo nke mmanu "Marcelo" onye na - ejide ike na nchegbu karia.
E nwere mkpụrụ vaịn ndị ọzọ nwere ọtụtụ vitamin. Ndị a bụ Black Panther, Ụtọ nke Ezigbo na Nwa-ukwu Olga.
Ụdị mkpụrụ osisi Marcelo dị iche iche ụdị FV-6-6 x LMsp-72 (Kesha-1 x ngwakọ 72). Ụdị nri a na-eri n'oge a "Marcelo" wetara Kapelyushny V.U. Ụdị a na-ahụkarị na Russia Federation, Ukraine na n'ebe ndịda Belarus.
Ọnụ nke Monte Cristo na Parisian na-esetịkwa n'aka onye ọrụ ugbo a.
Nabatara n'ubi nke onye na-amu amu ubi. Cuttings na ezi dịrị. Mgbe akuku, osisi ahu malitere imuta nkpuru n'iri afo abuo. Ịgha mkpụrụ vaịn a ka mma ịmepụta na ọdịda. Mkpakọrịta na mkpụrụ vaịn ndị ọzọ na rootstocks dị ebube. Ezi rootstock iche Kober 5BB, Fercal na Oppenheim CO-4.
Enyemaka Kapelyushny V.U. - mba breeder, ndị na-ahụ maka nkà mmụta ụlọ akwụkwọ.
Ịmalite viticulture malitere n'afọ 1969. Na-eduzi mmekọrịta dị ogologo oge na NIIViV ha. Ya.I. Potapenko. Kemgbe 1991, Vasily Ulyanovich na-aga n'ugbo ahụ "Nadezhda", bụ ebe o kere ogige na ubi-vine.
A na-etinye ha mkpụrụ vaịn ndị dị elu. Kwa afọ na-eduzi nhazi nke inflorescences. Kapelyushny mụọ ihe karịrị otu narị ụdị ma mepụta ụdị mkpụrụ vaịn dị iche iche nke mkpụrụ osisi kacha mma.
Ụdị vine dị iche iche Marcelo nwere osisi vaịn mara mma. Obere adighi ike n'ike. Ibu na osisi vine gwakọtara 40 ruo 45 oghere. Ejiri ezigbo ọrụ site na 30 ruo 35 oghere. A na-emecha osisi vaịn na anya 8-12. A na-atụ aro ka ị ghara ihicha ome na Ome abụọ.
Okpokoro ma nwoke ma nwanyi. Ụyọkọ ndị dị na njupụta bụ ọkara, nke nwere njikọ, dị nnọọ ukwuu, mara mma. Na uka ruru 0.8 na 1.5 kilogram.
Gurzufsky Rosy, Galahad na Augustine nwekwara okooko osisi bisexual.
Papillary tomato, nnukwu size 41x27 millimeters. N'iji ịdị arọ ruru 17 ruo 20 grams. Mkpụrụ nke "Marcelo" jiri ya tụnyere mkpụrụ yiri nke Rizamata na Transfiguration.
Mgbe mfri zuru oke, mkpụrụ osisi achacha acha odo odo na agba. Nwee oke osisi. Anụ ahụ nwere àgwà crunch, nke dị elu, na nnukwu ihe ọṅụṅụ nke ihe ọṅụṅụ. Ụdị dịgasị iche iche nwere nnukwu shuga. Mkpụrụ osisi nwere obere akpụkpọ anụ, echeghị mgbe ị na-eri nri. Site na ụyọkọ mkpụrụ vaịn na-esi ike. Ihe ísì ụtọ bụ mkpụrụ vaịn dị mfe.
Ị nwere ike ịmara ọdịdị na ogo na àgwà nke mkpụrụ osisi vine "Marcelo" na foto dị n'okpuru:
Mkpụrụ dị iche iche "Marcelo" dị elu, dị elu. Na-achọ ka ndị na-eto eto na-eto eto, ntozu okè zuru oke site na 110 ruo 115 ụbọchị.
A na-egosipụtakwa mkpụrụ dị elu site na Onyinye nke Magarach, Jubilee nke Kherson Summer Resident na Rkatsiteli.
N'okpuru osisi vaịn ndị a nyadoro, a pụrụ ịnọgide na-ewe ihe ubi ahụ ruo ogologo oge. Nke a na-aga n'ihu n'ịgba shuga. Ọ gaghị ada ụda. Nwere ike zayumlivatsya.
Transportability n'elu anya mgbe echekwa marketability nke mkpụrụ - na ọkwa kacha elu.
Nri mkpụrụ osisi ntu oyi na - ewepu ogo 24 Celsius. Na-achọ ebe nchekwa maka oyi.
Iji chekwaa mkpụrụ vaịn n'oge oyi, a ga-ekpochapụ snow dị anya site na mita abụọ ma ọ bụ atọ. Site na e guzobere n'ala ala, enwere nsị nke osisi si na òké ndị chọrọ igwu olulu n'okpuru snow. A machibidoro ịmetụ mkpụrụ vaịn. N'okpuru okpokoro nke snow, ọ ga-adị ọkụ dị ka n'okpuru ákwà mgbochi.
Mkpụrụ vine "Marcelo" adịghị emebi. Berry adịghị atụ egwu. Ọ na-anabata ọnọdụ ihu igwe.
Marcelo dị mfe, nke a na-ewepu ngwa ngwa. Ọrịa ọrịa bụ nkezi. Na ire ere ntụpọ, mildew, oidium - 2.5 ihe. Achọrọ ọgwụgwọ igbochi. Kwadoro Topaz, Teovid-Jed.
Ndị ọgwụ ọjọọ a bụ kọntaktị. Ya mere, a na-agbakwunye ihe ngwọta - nchacha nchacha ma ọ bụ glycerin.
Ụdị moth nwere ike ibute ụdị dịgasị iche iche - nru ububa na nku nke ihe karịrị otu centimita. Pupae nke butterflies oyi na ala ma ọ bụ n'okpuru ogbugbo nke bushes. N'oge opupu ihe ubi, ha na-emebi mmebi nke osisi ma na-eri nri na pulp nke unripe tomato. Na-egbochi uto nke bushes na ọdịdị nke isi awọ.
Iji na-alụ ọgụ megide moths grazewide, a na-emeso ala ahụ, a na-ehichapụ aka na ọkọlọtọ ọkọlọtọ site na ogbugbo ochie. Mgbe okooko osisi, a na-emegharị spraying na ihe ndị na-esonụ: 0.2% fosalon, ọkachamara ọkachamara, yana ike 0.1% povikurt ma ọ bụ cymbus. Ọzọkwa, kwụnye ọnyà pheromone na-esi ísì ụtọ KM-EK-1.
Okwesiri iburu mgbochi ufodu megide oria dika anthracnose, chlorosis, bacteriosis na oria cancer.
Mmechi Ụdị mkpụrụ vaịn Marcelo adịghị mma na ịkụ mkpụrụ, ma ọ chọrọ ọgwụgwọ mgbochi megide pests.
O nwere ntu oyi na-eguzogide nkwụsị 24 degree Celsius. Ụmụaka na-etolite ike. Ibu na osisi vine gwakọtara 40 ruo 45 oghere. Mkpụrụ osisi vaịn dị oke, na-eru otu kilogram. Mkpụrụ nke "Marcelo" jiri ya tụnyere mkpụrụ yiri nke Rizamata na Transfiguration.
Akwukwo mmanu site na obo ya di iche iche na ihe ogwugwu ya. Na agha megide mkpụrụ ndụ cancerSite na iwepu ogwu na-enweghị isi, ha na-azọpụta ahụ mmadụ site na mbibi n'efu.
Ezigbo ọbịa! Wepu nzaghachi gị na mkpụrụ osisi vine "Marcelo" na ihe ndị dị n'okpuru ebe a.
Osisi ebube n'ime ụlọ gị - ficus "Ginseng"
Metapneumovirus ọrịa nke nnụnụ: ihe ọ bụ na otu esi ebu agha
"Centaur 1081D": ọ bara uru ịkọ "anụ ọhịa" ahụ n'ubi gị?
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Marcelo": nkọwa na atụmatụ nke iji osisi